Kismaayo News » Halkani waa Radio Kismaayo
Halkani waa Radio Kismaayo
Kn: Sanadka markii uu ahaa 1943 dii ayaa raadiyihii ugu horeeyey ee uu qaran leeyahay laga furey Soomaaliya, waxaa lagu magacaabi jirey Radio Codka Goodirka, kaasoo markii dambe loo bixiyey Radio Hargeysa oo uu illaa maanta yahay.
Xaaji Cabdi Xuseen ayuu ahaa qofkii ugu horeeyey oo Raadiye codkiisa laga maqlo, isagoo markii dambane madax ka noqdey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da sanadkii 1956dii.
Waxaa kale oo la furey Radio Muqdishoow, isaga iyo Radio Hargeysana waxa ay ahaayeen udub dhexaadka garashada bulshada, iyo indhaha qaranka, waloow markii lasoo gaaray 1991-kii ay gacanta ku dhigeen jabhadihii dowladda ridey.
Sidaasi oo ay tahay, waxaa jirey mar kasta kaalin banaan, gaar ahaan marka laga hadlayo magaalada sedexaad ee dalka ugu weyn, ugu dad badan, xagga wax soo saarka iyo qeeyraadkana kaalinta labaad galaysa.
Waxaa jirta dood caan ah oo dhahaysa “dib u dhiska dalka, waxaa ka horeeya dib u dhiska dadka“, taasoo loola jeedo in si kasta oo dalka dib loogu dhiso ay joogto maskaxdii shalay burburisey markii uu dalka dhisnaa, maskaxdaasi oo wacyigalin, caqli-celin iyo baraarujin loo samaynina aysan wax tari doonin dib u dhiska dalka.
Marka hadalka meeshaasi la mariyo, waxaa la garan karaa muhiimadda ay leedahay magaalada Kismaayo oo lagu doodi karo in ay ka mid tahay udub dhexaadyada colaadaha dalka, waxaa magaalada la kala qabsaday wax ka badan 14 jeer, walina waa meel ugxantii colaadaha ay ku aasanyihiin.
Nus qarni ka badan kadib xiligii ay hawlgaleen Radio Hargeysa iyo Radio Muqdishoow ayaa warbaahinta dowladdu leedahay laga hergalinayaa Kismaayo, balse haatan farqiga weyn ee jira uu yahay in waxa loo shaqaynayo ay yihiin shacabka, halkii markii hore loo wada adeegi jirey madaxda dalka, sidaba laga yaabo in uu dhawaan ka dhawaajiyey madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud oo dad badan kula hadlayay magaalada Nairobi.
Wasiirka warfaafinta, boostada iyo Isgaarsiinta Cabdulaahi Cilmooge oo meel fagaaro ah kula hadlay odayaasha Kismaayo ayaa ku yiri “Haddii horey aad u maqli jirteen Radio Muqdisho, haatan kusoo dhawaada Radio Kismaayo oo codkiina aad ku gudbisataan, shacabkiinana kula hadashaan“, waxaana u dhacay sacab weyn oo daqiiqado is hayay, sida warkaasi loogu farxay darteed.
Haddii horey ay dooda u ahayd in wixii dadka u dhaxeeyey ay dowladda Xamar oo kaliya ku koobtey, hadda halkan waxaa ah adeeg dowli ah oo dowladda dhexe ka yimid oo dadka lasoo gaarsiiyey. Waxaase wali lagu doodi karaa in waxqabadka dowladda uu “hadal” dhaafi la’yahay.
Radio Kismaayo waa idaacad barnaamijyadeeda iyo wararkeeda 90% noqon doonaan kuwa ku saabsan sedexda gobol, laguna diyaariyey Kismaayo, islamarkaasina ay 100% ay ka hawlgalayaan mihnadlayaasha saxaafadda gobolka.
Waxa ay si buuxda idaacadda ola shaqayn doontaa maamul kasta oo gobolka ka jira, laga bilaabo kan KMG ah ee hadda ka jira, iyo kuwa iman doona, iyo waliba dowladda dhexe oo ah dabcan ah tan meeshaba keentey, balse danta ay u adeegi doonto idaacadda waa tan shacabka si aan eex iyo kala fuquuq lahayn.
Waxay idaacaddu dhiirogalinta doontaa hidaha iyo dhaqanka shacabka goboladan ku dhaqan oo aanan in badan oo hore looga hadlin, suugaanta iyo murtida dadka, hogaanka dhaqanka iyo caadooyinka aan diinta ka hor imaadsanayn sida xeer Soomaaliga.
Waxay wacyigalin ka samayn doontaa xagga wax soosaarka beeraha iyo badda iyo xoolaha, warshadaynta iyo sanaacadda casriga ah iyo waliba aqoonta mid kast oo ay tahayba.
Waxaa raadiyaha ka mabnuuc ah qabyaaladda, isku dirka dadka, dhiirogalinta qaswadayaasha, ceeyda iyo shaqsi weerarka.
Waxay ka shaqaynaysaa isu soo dhaweynta dadka walaalaha ah, aslaaxinta nabbada, xoojinta afka Soomaaliga dhigaal iyo dhihisba iyada oo la isticmaalayo bar internet oo la furayo, curinta iyo erey bixinta, iyo waliba tabinta iyo uruurinta taariikhaha duugga ah ee ay dadku leeyihiin.